IRosari yokubeka umntwana uThixo ebhedini Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Rhoqo nge-24 kaDisemba, kubhiyozelwa usuku lweKrisimesi kwaye nge-25 kaDisemba navidad. Ngale mini kukho isithethe sokwenza i IRosari yokubeka uMntwana uThixo ebhedini ekuzalweni. Lo msitho unokwenziwa njengentsapho kwaye lelinye lawona maxesha anomdla kumaKatolika, kuba limela ukufika koMntwana uYesu ekhayeni lethu. Kufuneka kukhunjulwe ukuba oku kufuneka kwenziwe ngaphambi kwaphakathi kobusuku nge-24 kaDisemba, xa usapho luhlanganisene malunga nomkhumbi okanye ukuzalwa kukaYesu.
Yazi iinkcukacha zomthandazo wokulalisa umntwana uThixo.
1 Umthandazo kunye nerosari yokubeka uKristu umntwana ebhedini
1.1 Umfundi wokuqala
1.2 Umfundi wesibini
1.3 Umfundi wesithathu
2 Iingoma zokulalisa umntwana onguKristu
2.1 Cwaka ebusuku
3 Yintoni ikrisimesi?
Umthandazo kunye nerosari yokubeka uKristu umntwana ebhedini
Xa uqala ukuthandaza irosari Ukubeka umntwana onguThixo ebhedini, kufuneka sithathele ingqalelo ukuba kungakho abafundi ababini nangaphezulu ngexesha lokwenza eli siko lincinci, njengoko bekutshiwo, phambi kobusuku ngoDisemba 24, kunye nezihlobo zethu. Kwaye iqala ngolu hlobo lulandelayo.
Bawo othandekayo, Thixo wezulu nomhlaba: Ngobu busuku bungcwele sifuna ukubulela ngothando lwakho. Enkosi ngosapho lwethu nangekhaya lethu. Enkosi ngabahlobo bethu, abamelwane nangabantu abasebenza nathi. Sisikelele ngolu suku lubalulekileyo silindele ukuzalwa koNyana wakho.
Sincede silungiselele iintliziyo zethu ukuba zamkele uMntwana uYesu ngothando, ngovuyo kunye nethemba. Sihlangene apha ukuba simthande kwaye simbulele ngokuza emhlabeni wethu ukuzalisa ubomi bethu. Namhlanje, xa sicinga ngomkhumbi, sikhumbula ngakumbi iintsapho ezingenamakhaya, ukutya kunye nentuthuzelo. Sikucela bona ukuze iNtombi Enyulu kunye neNgcwele uJoseph babancede bafumane ikhaya elifudumeleyo.
Bawo olungileyo, sicela ukuba uMntwana uYesu naye azalwe ezintliziyweni zethu ukuze sikwazi ukunika abanye uthando osibonisa lona yonke imihla. Sincede sibonise inceba yakho eninzi ebomini bethu. Ngamana thina, kunye neengelosi zakho kunye neengelosi ezinkulu, sihlala siphila sikudumisa kwaye sikudumisa.
(Okwangoku umntu ophuma kusapho, ngokwesiqhelo lelona lungu lincinci, kwaye ngokuxhomekeke kwizithethe zosapho, usana olunguYesu lubekwa emkhombeni, kodwa ukuba sele elapho, kubekwe ikhandlela elincinci okanye ikhandlela phambi kwakhe).
Intombikazi enguMariya, enkosi ngokwamkela ukuba nguMama kaYesu noMama wethu, enkosi ngothando lwakho kunye nenkuselo. Siyazi ukuba imihla ngemihla uyasithethelela nangeenjongo zethu, enkosi Mama. Mnumzana Saint Joseph, enkosi ngokuba nguyise nomkhuseli woMntwana uYesu, siyakucela ukuba usithandazele kuThixo ukuze sibeyintsapho emanyene eluthandweni kwaye sibe ngumzekelo woxolo noxolelwaniso kwabanye. Amen.
Sigqibile ngokufunda saqhubeka sathandaza, kuqala uBawo Wethu, kulandele u-Hail Mary kwaye sagqibela ngokunika uzuko kuThixo. Ngale ndlela, siza kube sigqibezela isithethe sokubeka umntwana onguKrestu ukuba alale ngomhla weKrisimesi nosapho lwethu.
Iingoma zokulalisa umntwana onguKristu
Ngokwendalo, xa kuphele eli siko, kungavunywa iculo leKrisimesi, ngokwesiko kwaye ngendlela efanayo, onke amalungu osapho anikezane ngoxolo, ukuze eli siko liphele ligcwele ziintsikelelo, ubabalo nothando . Oku kuqala ngolu hlobo lulandelayo.
Intsimbi phezu kweBell
uzobona uMntwana ebhedini.
IBhetelehem, iintsimbi zaseBhetelehem
ukuba iingelosi zidlala,
UYA KUZIPHATHALELA NTONI IINDABA?
Uhlanganise umhlambi wakho,
uyaphi, malusi omncinci?
Ndiza kuthatha kwi-portal
Ingoma yam nothando lwam.
kuba uThixo uzelwe.
Ukuhamba ezinzulwini zobusuku
uhamba phi mfundisi?
Ndimthatha uMntwana ozelweyo,
njengoThixo, intliziyo yam.
1. Ubusuku obuzolileyo, ubusuku bothando:
ugcwalisa isibhakabhaka ngokuqaqamba;
ingoma iphakama phezulu:
Ndikwazisa ngolonwabo olungenakuthelekiswa nanto,
UThixo wazalwa emhlabeni,
namhlanje eBhetelehem yakwaYuda.
2. Ubusuku obuzolileyo, ubusuku bothando:
Yonke into ilala ijikeleze;
bajonge kuphela bejonge ubuso bomntwana wabo ngoxolo lweengelosi,
UYosefu noMariya eBhetelehem. (x2)
3. Ubusuku bukaThixo, ubusuku boxolo:
Ukukhanya okungunaphakade ebusuku kwakhanya:
bubuqaqawuli boNyana kaThixo.
Umntwana uYesu ulele. (x2)
4. Ubusuku bukaThixo, ubusuku boxolo:
ilanga elikhanyayo sele likhanya,
kwaye iingelosi ziyavuma:
Uzuko kuThixo, uzuko kukumkani wasezulwini.
5. Ubusuku bukaThixo, ubusuku boxolo:
ukukhanya okutsha kwasezulwini,
Ikrisimesi emyoli yatyatyamba:
lilizwi nomyalezo woxolo,
usana uYesu alale. (x2)
6. Ubusuku obonwabisayo beKrisimesi:
UThixo uza kusindisa,
Ngosuku lweKrisimesi xa Uthando lukhanya,
Imfihlelo kaThixo efihlakeleyo.
7. Ubusuku obuzolileyo, ubusuku bukaThixo:
umalusi uya esangweni,
ifumana iNkosi phakathi kweendiza.
LiLizwi elathathwa yinyama.
KumaKristu nakumaKatolika, iKrisimesi ngumhla wokubulela, ukunika uthando kunye nolonwabo, kuba ukuzalwa kukaYesu kubonisa lonke uthando lukaThixo, owaba ngumntu ofayo kwaye wahamba phakathi kwethu. IKrisimesi ngumhla apho ukubhiyozela ukufika kukaKristu kubhiyozelwa khona, ukuze kusindiswe umhlaba kunye nothando olukhulu analo uThixo ngabantu.
Nangona ungaqinisekanga ukuba uYesu wazalwa ngaluphi usuku. Iincwadi zeVangeli azimiseli umhla ungqalileyo, zikho neenkcukacha eziphikisanayo. Nangona kunjalo, iThe Catholic Encyclopedia ibonisa oku ukuba: Iincwadi zeVangeli aziboneleli ngoncedo malunga nomhla wokuzalwa kukaKristu; zininzi izinto eziphikisanayo ezisekwe kulwazi lwakho. Kubonakala ngathi akunakwenzeka ukuba ubalo lwenziwe ebusika, kuba inani labemi belingenakufika endleleni.
Ukuba ulithandile eli siko, ungathandabuzi ukulonwabela nosapho lwakho. Ukuba ufuna ukwazi ulwazi oluthe kratya, ungandwendwela iwebhusayithi yethu ukufumana ulwazi oluthe kratya njenge Iincwadi kumntwana kaThixo. Sishiya kwakhona le vidiyo ilandelayo, apho ungonwabela le Rosary kunye nendlela eyenziwa ngayo. Kude ibe lilixa elizayo!